Iiwotshi ezi-6 eziphambili zezemidlalo, ukhetha eyiphi? | Amadoda aQinisekileyo
Eyona mlindo yezemidlalo
Ukuba wenza imidlalo, kusenokwenzeka ukuba ufuna isixhobo esikunceda ukuba ubale iikhilomitha oziqhubayo, iikhalori ozisebenzisayo nezisebenza njengerekhodi lemisebenzi yakho. Iwotshi yezemidlalo zezona zibeke iliso kwimisebenzi yakho yomzimba. Kukho amawaka eentlobo kunye neemodeli ezinemisebenzi eyahlukeneyo kunye neempawu.
Kule posi sikulethela isishwankathelo Olona lawulo lubalaseleyo kwezemidlalo ngazo zonke izibonelelo zayo kunye nezinto ezingalunganga kunye namaxabiso. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba yeyiphi iwotshi ekulungeleyo?
1 Ukubukela kwezemidlalo kunye nomsebenzi wazo
2 Olona lawulo lucetyiswayo
2.1 I-Polar M200
2.2 Imbaleki yeTomTom
2.4 I-Polar M400
2.5 TomTom Cardio Imbaleki
Ukubukela kwezemidlalo kunye nomsebenzi wazo
Xa usenza imidlalo kuyacetyiswa ukuba ulinganise iiparameter zakho ukuze ube nakho ukoyisa ngokuhamba. Emva kweentsuku zoqeqesho, umzimba wakho uphucuka kwinqanaba eliqhubekayo. Ukujonga ukubetha kwentliziyo yakho, umgama ohanjiweyo, iikhalori ezitshisiweyo, njl. Kukho umlindo wezemidlalo. Ukongeza, uninzi lweziwotshi zinomsebenzi weGPS ukubala ukuba uhambe umgama omde kangakanani ngexesha lokubaleka, ukudada okanye iseshoni yokuhamba ngebhayisikile.
Ukuba nokubek'esweni ukubetha kwentliziyo kunye neGPS esihlahleni sakho akuzange kube lula. Kukho izigidi zeentlobo ezahlukeneyo kwintengiso. Kuxhomekeka kuyilo, uphawu kunye nokusebenza, sifumana iiwotshi ezahlukeneyo ezinomgangatho olungileyo kunye nomyinge wexabiso. Phakathi kweyona nto idumileyo sifumana uGarmin, iPolar kunye neTomTom.
Kufuneka kuthiwe ngaphambi kokuqala ukubahlalutya nganye nganye, ukuba akukho mlindo wokubaleka okanye eminye imidlalo eyeyona ibalaseleyo. Njengesiqhelo, apha sibeka phambili iimfuno zomntu ngamnye. Mhlawumbi le yeyona parameter inzima kakhulu ukufikelela kwimodeli efanelekileyo kakhulu kulowo nalowo uhambelana nepokotho yethu. Sinokuzifumana sinewotshi esebenza kakuhle kodwa kuyilo olubi okanye ngexabiso eliphezulu. Ke ngoko, kungcono uhlalutye zonke ezinokwenzeka ngaphambi kokufumana enye kwaye emva koko uzisole.
Olona lawulo lucetyiswayo
Ukusukela ngoku ukuya phambili, siza kukhetha uluhlu lweewotshi ezigqwesileyo kwintengiso. Eyona nto sithetha ngayo izibonelelo, uyilo kunye nomgangatho wexabiso / ixabiso. Njengoko sihlala sisitsho, umntu ngamnye wahlukile kwaye iwotshi yakho inokuziqhelanisa naye kwaye iimfuno zakhe zisenokungabikho kolu luhlu.
Nangona kunjalo, siqhubeka sikhankanya kwaye sihlalutya ezo zamkelweyo sisininzi sabantu bezemidlalo.
Siqala olu luhlu nge-GPS eqhuba iwotshi kunye nokujonga ukubetha kwentliziyo. Ixabiso lakho kwi Amazon Kuku 99,00 euro. Le wotshi ilungele ukuqala kwihlabathi lokubaleka ngeGPS ngesandla kunye nemitha yokubetha kwentliziyo. Ngale ndlela unokulawula isingqisho sakho kwaye uhlengahlengise inkcitho yekhalori kwinjongo oyifunayo.
Inokudityaniswa kwi-smartphone ukufumana izaziso ezivela kwezinye izicelo. Ixabiso lisezantsi kuba isikrini sayo asichukumisi, kodwa yi-inki emnyama nomhlophe. Inzwa yokubetha kwentliziyo kunye neGPS zichanekile. Ibhetri inayo ixesha leentsuku ezi-6 ukuba alisetyenziswanga kunye neeyure ezi-6 ukuba ukubetha kwentliziyo kunye ne-GPS kuyajongwa.
Le wotshi ilungele ukubaleka nokubhukuda. Ixabiso lakho kwi AmazonNgu-89,90 i-euro. Ibizwa ngokuba sisigebenga saseDatshi kwaye ukusetyenziswa kwayo kulula. Isikrini sayo sinobungakanani bee-intshi ze-1,37. Ibonisa iimpawu zesantya, umgama kunye nesantya. Ukongeza, ukuba siyayidibanisa nokubeka esweni intliziyo iyakwazi ukubeka esweni ngexesha lokwenyani ngokuchasene namanqaku akho angaphambili.
Ubomi bebhetri buyagxekwa kwaye uyilo lwayo lunokuphucula. Iimfuno zokuvumelanisa yonke imihla ukuze kugcinwe ukuchaneka kweGPS. Unokuntywila ukuya kuthi ga kwiimitha ezingama-50 phantsi kwamanzi.
Yiwotshi enexabiso lesaphulelo ngokufanelekileyo kwimisebenzi enjengebhayisikile kunye nokubaleka. Yenzelwe ukuba ibe yeyonke-in-in kwaye hayi ukubukela nje. I-GPS eyakhelwe-ngaphakathi isinceda sazi umgama kunye nesantya esihamba ngaso ngelixa sibaleka. Sinokulazi nenani lamanyathelo esele siwathathile kunye neekhalori esizichithileyo.
Inokungeniswa ukuya kuthi ga kwiimitha ezingama-50 phantsi kwamanzi. Nge-GPS esebenzayo, ibhetri ihlala iiyure eziyi-8. Kwimodi yokujonga kunye nokubeka iliso kunokuhlala kwiiveki ezi-5.
Le wotshi inesivamvo sentliziyo seH7. Kukulungele ukusebenza nokuhamba ngebhayisikile. Kuphakathi kwemilindo yezemidlalo ebalaseleyo kuba lukhetho lwenzwa elungileyo ngexabiso elifikelelekayo. Vula Amazon ixabiso layo yi-125 euro.
Inokulinganisa ukuphakama, umgama ohanjiweyo kunye nexesha ebesililolonga. Unokuntywila ukuya kuthi ga kwiimitha ezingama-30 phantsi kwamanzi. Ungayijonga imisebenzi yethu imini yonke, usivumele ukuba sicwangcise uqeqesho lwethu kunye neapp. Oku kuthetha ukuba Singayisebenzisa njengesongo somzimba.
TomTom Cardio Imbaleki
Enye imodeli evela kuhlobo lweTomTom. Ixabiso lakho kwiAmazon zii-euro ezingama-165. Iscreen sayo se-1,37-intshi kwaye sibandakanya ukubek'esweni kwentliziyo yokujonga esisebenza ngokuchanekileyo yenza ukhetho olufanelekileyo. Unokwenza ishedyuli yokusebenza kwexesha ukuze ukwazi ukuziphucula. Unokuntywila ukuya kuthi ga kwiimitha ezingama-50 phantsi kwamanzi.
Ingxaki kukuba isoftware eqokelela idatha kwisixhobo ayiphuhliswanga kakuhle.
Njengoko ubona, ezi ntlobo zintathu zezona ziphakamileyo kwiwotshi yezemidlalo efanelekileyo. Olunye loyilo oluntsonkothileyo kwintengiso. Isikrini sayo esikhulu se-2,5-intshi yenza ibonakale kwaye kulula ukuyiphatha. Ngenye yeewotshi ezimbalwa ezineGPS kunye nombala wekhusi. Ine-accelerometer kunye nokubeka iliso kwimilinganiselo yokubetha kwentliziyo.
Iyahambelana neBluetooth kwaye inokudityaniswa kwii-smartphones okanye ezinye iisenzi zangaphandle ezinje ngezigadliso zentliziyo. Idatha yakho inokulayishwa kwezi zixhobo ukugcina umkhondo kwimidlalo yethu. Ingxaki inayo kukuba ayifumaneki kwiivenkile ezininzi ngenxa yemfuno yayo ephezulu.
Ndiyathemba ukuba emva kokubonisa eziwotshi ungathatha isigqibo sokubona eyona ilungele wena suitable
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » yokuPhila » Te knoloji » Eyona mlindo yezemidlalo
Yonke into ofuna ukuyifumana malunga nezihlangu zikaCastilian
Yintoni i-electrostimulation, ukuba isebenza njani, iintsomi kunye neenyaniso